“Festival d’art urbain”: haneho an-tsary ny fahafatesana Rafalia | NewsMada
“Festival d’art urbain”: haneho an-tsary ny fahafatesana Rafalia
Anisan’ny manomboka mahazo vahana eto Madagasikara ankehitriny ny zavakanto fanao an-tanàn-dehibe. Tafiditra ao anatin’izany ny saripika izay afaka maneho zavatra maro tokoa. Iray amin’ireny ny fahafatesana asongadin’i Henitsoa Rafalia.
Mitohy hatrany ireo hetsika samihafa tafiditra ao anatin’ny “Festival d’art urbain”, sehatra iray hanehoana ireo talenta samihafa voasokajy ao anatin’ny hoe “kanto an-tanàn-dehibe”. Anisan’ny hiavaka ny fampirantiana, hotanterahina etsy amin’ny Is’art galerie etsy Ampasanimalo, ny 26 oktobra hatramin’ny 3 novambra.
Fampirantiana sary, sanganasan’i Henitsoa Rafalia, izy ity ary mifanaraka tsara amin’ny lohahevitry ny “Festival d’art urbain” andiany fahadimy ny hoe “ny fahafatesana”. Tany amin’ny toeram-pamonoana omby no nataon’ity mpaka sary matihanina ity ny fakana ny sary, haranty amin’io fotoana io.
Araka izany, aseho amin’ny sary ny fomba famonoana ireo biby, lasa sakafo sy vatsin’ny olombelona. Tsy izay ihany anefa ny ho hita ao fa ny “any ambadika”. Tsy inona izany fa ny fifandraisana eo amin’ilay biby vonoina sy ilay olona mamono azy. Araka ny fanazavan-dRafalia, misy ny fihetseham-po, amin’ny andaniny sy ny ankilany.
Saingy, mitovy hatrany ny fiafarany, ny fahafatesan’ilay biby. Eto, ny fialan’ny fofon’aina ny dikan’ny fahafatesana. Na izany aza, misy koa ny “fahafatesana” ao anatin’ilay mpamono, miaina isan’andro isan’andro izany fihetsika izany. Ny ampahany amin’ny maha izy azy no heverina fa “maty” eto.
Nomarihin-dRafalia fa tafiditra ao anatina tetikasa iray, nanomboka ny taona 2015, ireto andian-tsary nalainy ireto. Mbola mitohy io tetikasa io, hatramin’izao, saingy notsongaina manokana ireo sary miisa 10, momba ny “fahafatesana”, noho izy ireo mifanaraka amin’ny lohahevitry ny “Festival d’art urbain” andiany fahadimy.